‘नयनभरी’को सफलतापछि किरणको ‘मस्की मस्की’ (भिडियोसहित) « रंग खबर
‘नयनभरी’को सफलतापछि किरणको ‘मस्की मस्की’ (भिडियोसहित)
रंग खबर, काठमाण्डौं । गायक किरण इजम लिम्बुको ‘मस्की मस्की’बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनको दोश्रो एल्बम ‘ओझेल’मा समावेश यो गीतको भिडियोमा चर्चित मोडल पल शाह र निशा लिम्बुले अभिनय गरेका छन् ।
किरणले यसअघि सार्वजनिक गरेको गीत ‘नयनभरी’मा पल र निशाकै जोडी देखिएको थियो । गीतलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका छन् । हालसम्म युट्यूबमा पाँचलाख भन्दा बढी पटक गीत हेरिसकिएको छ । ‘मस्की मस्की’को निर्देशन र सम्पादन पनि ‘नयनभरी’का निर्देशक विज्ञान राईले नै गरेका हुन् ।
सुन्दा र हेर्दा उस्तै रमाईलो लाग्ने यो गीतको शब्द र संगीत गायक जेनिश लामाको हो । संगीत संयोजन भने टेकेन्द्र याक्सोको रहेको छ । गीतमा पलले निशालाई आफ्नो प्रेममा पार्नका लागि गरेको संघर्ष देख्न सकिन्छ । अन्त्यमा, कसरी निशा पलको हुन्छिन् ? भिडियोमा देखाउन खोजिएको छ ।
भिडियोको छायांकन ज्ञानेन्द्र शेर्माले गरेका हुन् । यो गीतबाट आफुले निकै आशा राखेको गायक इजमले बताए । ‘‘नयनभरी’जस्तै यो गीतलाई पनि दर्शकले रुचाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ’, उनले भने ।
रंगखबर, काठमाडौँ – गायिका इन्दिरा जोशीले नयाँ गीत ‘पछ्यौरी’ सार्वजनिक गरेकी छन् । सार्वजनिक गीतमा
‘मात्तिएको मौसम’मा मस्त जोर्डन र स्मारिका
रंगखबर, काठमाडौँ – भूमिका राईले आफ्नो प्रस्तुति रहेको गीत ‘मात्तिएको मस्त मौसम’ सार्वजनिक गरेकी छन्
ऋचाको हातमा यसराजको मेहेन्दी रंग !
रंगखबर, काठमाडौँ – गायक आनन्द कार्की र शोभा पाण्डेको आवाजमा ‘मेहेन्दी’ गीत सार्वजनिक गरिएको छ
‘जाम भो माइली’को सफलतापछि प्रकाशले ल्याए ‘मन भुल्छ’
रंगखबर, काठमाडौँ – गायक प्रकाश दुतराजलाई ‘बैनी झ्यालैमा’, ‘घर कता हो बैनीको’, ‘जाम भो माइली’लगायतका
‘के घर के डेरा’लाई डेट दिंदै फागुनमा पुग्यो ‘परस्त्री’
वीर बलभद्रको वीरतामा आधारित ‘नालापानी’को मोशन पोस्टर रिलिज
पुष अन्तिममा सारा र प्रितमराजको ‘गुञ्जन’ रिलिज हुने